Taive Pano Nokusingaperi: Tangisa Trailer Game Scenes - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | May 5, 2022 | nhau, Vhidhiyo mitambo
Yese Mayhem Mitambo yakafumura official Taiva Pano Nokusingaperi kuvhura turera, iyo inoratidzira mu-mutambo mutsara wemutambo kekutanga kubvira chiziviso. Kutanga Chivabvu 10th, vatambi vachakwanisa kuona iyo Taive Pano Nokusingaperi nyaya yavo paPC (Steam uye Epic Game Store).
Kwangosara mazuva mashoma kusvika vatambi vapinda muCastle Rock zvakare! Taive Pano Nokusingaperi is asymmetric co-op puzzler inoburitsa Chivabvu 10 paSteam uye Epic Games Store, uye inouya munguva pfupi kuXbox nePlayStation. Vanopinda kuWASD muLondon uye PAX East muBoston vakatokwanisa kuwana kutarisa kwekutanga kumutambo, uye kubva pamhinduro yakanaka uye maitiro echido ikoko, zviri pachena kuti vatambi havagoni kumirira kuti vatore maoko avo pamutambo.
Taive Pano Nokusingaperi: maawa gumi nemaviri emapuzzle
Sekureva kwevagadziri, Taive Pano Nokusingaperi ichave Yese Mayhem Mitambo 'yakanyanya inonakidza mutambo kusvika parizvino. Chikwata chiri kuseri kwezita parizvino chakakura kupfuura nakare kose uye chakashanda nesimba kugadzira mutambo weWe Were Here unodarika iwo akautangira mune ese magirafu uye chiyero. Izvi zvinoita kuti Takanga Tave Pano Nokusingaperi ese ari maviri makuru uye ane graphical epamusoro mutambo munhevedzano, iine nyika mhenyu izere neruzivo rwakanaka uye anopfuura makumi maviri nemaviri-nyowani mapuzzle. Kunyangwe vane ruzivo vanogadzirisa puzzle vanogona kutarisira kupfuura maawa gumi nemaviri ekunakidzwa.
Vatambi vanozoongorora zvaimbozivikanwa nzvimbo dzeCastle Rock uye, kunze kwekuchengetedza, vanowana nhoroondo yeRockbury, vagari vemuguta uye hurongwa hwekupukunyuka hwekupokana hwakamukira mambo. Tariro inotungamira vatambi kuguva rinotyisa uye vovarega vachidzika mumvura ine rima yenzvimbo yekutanga. Vanodzidza zvakawanda nezvezviitiko zvekare zvakaitika munzvimbo iyi isinganzwisisike. Pavanenge vachiedza kutiza kubva kuCastle Rock muna Takanga Tiri Pano Nokusingaperi, vangangotanga kutenda zvavaitya nguva yose iyi. Unogona kunyatsotiza Castle Rock?
Yese Mitambo yeMayhem inopa vatambi kuona munhoroondo yeTaive Pano nhevedzano ine mhenyu chiitiko vhidhiyo nhepfenyuro inotaura kumashure kweiyo nhevedzano uye zvakare inoratidza vatei veazvino chikamu: Takanga Ari Pano Nokusingaperi.
Zvikamu zviviri zvekupedzisira zveTaive Pano Nhau: Chronicles yeCastle Rock ichaburitswa rimwe zuva mutambo usati watanga muna Chivabvu 10. Iyo yekuseri kweiyo haunted castle muTaive Pano mutambo wemitambo unoudzwa muzvitsauko zvitanhatu kubva pakuona kwaKees Klokkenmaker, mumwe wevazukuru vake.
Kupemberera izvozvo Taiva Pano Nokusingaperi Kubuda svondo rinouya, Yese Mayhem Mitambo yakaburitsa turera yekutangisa iyo inosanganisira yekutanga mavhidhiyo emutambo wacho. Mune ino turera, izwi reBenzi rinozivikanwa rinokutungamira kuburikidza nezvakawanda zvemitambo yemutambo. Izvi zvinotopa nzwisiso yakanaka mumapuzzle ayo vatambi vanofanirwa kugadzirisa kuti vatize Castle Rock.
Kare Gamescom 2022 inopemberera mitambo yeindie pane saiti muCologne
Inotevera Nyowani paFortnite: Tamba vanopfura pasina kuisirwa
Hegemony: ChiGerman vhezheni yebhodhi mutambo mune forge
Yakaraswa: Itsva portal se "yakazara mhando yemitambo zvigadzirwa zvevatapi venhau"
Operation Amber Sky: New Crossover Chiitiko Chinouya Nokukurumidza
Crowdfunding: Yazvino mitambo yebhodhi paKickstarter (14th svondo 2021)